Ciidamada Dowladda & kuwa KG oo howlgal qorsheysan fuliyey - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Ciidamada Dowladda & kuwa KG oo howlgal qorsheysan fuliyey
Wararka laga helayo degmada Diinsoor e Gobolka Baay ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Dowladda Soomaaliya oo ay wehlinayeen kuwa Maamulka Koonfur Galbeed ay howlgallo ka fuliyeen tuulooyin hoostaga degmadaas.
Howlgalka oo uu hoggaaminayay Guddoomiyaha degmada Diinsoor ee Gobolka Baay ayaa waxaa Saraakiisha qeybta ka ah ay sheegeen inay ka fuliyeen tuulooyinka gurman iyo gurbaan oo hoostaga degmada Diinsoor,halkaas oo ay ku sugnaayeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Guddoomiyaha degmada Diinsoor ee Gobolka Baay Cabdisalaan Xaaji Siidow ayaa sheegay in Ciidamada Dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ay howlgalkaas guulo ka gaareen,isla markaana khasaaro ku gaarsiiyeen Al-Shabaab.
Waxaa uu sheegay in dagaal kooban ay la galeen Ciidamada Ururka Al-Shabaab,isa markaana weli Ciidamadu ay wadaan howlgallo lagu donayo in Ururka Al-Shabaab looga saaro deegaannada hoostaga degmada Diinsoor.
Previous articleDhageyso:-Hir-Shabeelle oo u digtey Dadka Garsoorka u doonta Al-Shabaab
Next articleAmar la dul-dhigay Shirkado ka howlgalla Magaalada Khardho